Ubuntu 18.10 yave kuwanikwa kurodha pasi nekuisa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo itsva vhezheni yeUbuntu yakatoburitswa kare, nekuti nezuro timu yeCanonical yakaita ziviso yekuwanikwa kweshanduro nyowani ye Ubuntu 18.10 iyo inonzi codenamed Cosmic Cuttlefish.
Nezve izvo zvinodiwa nevashandisi vekupedzisira, ino nyowani yekushandisa sisitimu haisi kungopa chete sarudzo nyowani yedesktop madhesiki, asi zvakare yaisa nyowani zvigadziriso.
Iyi vhezheni nyowani inotarisa pane akawanda-gore deployments, AI software kuvandudza, nyowani nharaunda desktop desktop, uye yakapfuma desktop kusangana.
Iyo nyowani vhezheni ichabatsira kukurumidza kugadziridza kugadzirwa uye kubatsira mabhizinesi kushanda neiri nani kumhanya, apo ichikwira pamakore mazhinji uye akasiyana akasiyana anotungamira-kumucheto zvishandiso.
1 5 akakosha maficha eUbuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish
1.1 Nyowani yekumanikidza algorithms yekukurumidza kumisikidza uye kutanga.
1.2 Yakagadziridzwa yemazhinji-gore komputa
1.3 Mifananidzo mitsva yekumisikidza uye madingindira muUbuntu Cosmic Cuttlefish
1.4 Yakagadziriswa mitambo yekutamba
1.5 Yakagadziridzwa yekutanga nguva uye XDG portal rutsigiro rweSnap maapp
2 Dhawunirodha Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish
5 akakosha maficha eUbuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish
Nyowani yekumanikidza algorithms yekukurumidza kumisikidza uye kutanga.
Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish inoshandisa kumanikidza algorithms senge LZ4 uye ztsd, iyo inotsigira 10% nekukurumidza kutanga uchienzaniswa neyaishandiswa mushanduro yayo yapfuura. Iwo maalgorithms zvakare anofambisa iyo yekumisikidza maitiro, iyo inotora ingangodaro maminetsi mashanu mune isingaite modhi.
Yakagadziridzwa yemazhinji-gore komputa
Iyi vhezheni itsva ndeye yakanyatsogadzirwa ine gore-based deployments mupfungwa.
Ubuntu Server 18.10 mifananidzo inowanikwa pane makuru veruzhinji makore. Kwemakore ega, kuburitswa kunotsigira OpenStack Rocky yeAI neNFV kumhanyisa Hardware.
Iyo inouya naCeph Mimic kudzikisira kuchengetedza pamusoro.
Kusanganisira Kubernetes vhezheni 1.12, iyi nyowani vhezheni inopa yakawedzera chengetedzo uye scalability nekugadzirisa otomatiki sumbu kupa pamwe neyekufambisa dura kunyorera.
Izvo zvinonyanya kuterera kune zvine simba zvebasa kuwanda kuburikidza nekukurumidza chiyero.
Mifananidzo mitsva yekumisikidza uye madingindira muUbuntu Cosmic Cuttlefish
Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish inoshandisa iyo Yaru nharaunda theme kutsiva ayo Ambiance uye Radiance madingindira ayo akatoitwa kwenguva yakareba.
Iyi tema dingindira inopa iyo desktop nyowani kutaridzika.
Yakagadziriswa mitambo yekutamba
Iyo nyowani system kernel yakagadziridzwa kune iyo nyowani vhezheni yeLinux kernel 4.18. Kunze kweizvi, Kugadziridzwa kweMesa uye X.org zvakanyanya kuvandudza mashandiro emutambo.
Graphics rutsigiro rwunowedzerwa kuna AMD VegaM pane ichangoburwa Intel Kabylake-G CPUs, Raspberry Pi 3 Model B, B +, uye Qualcomm Snapdragon 845.
Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish inosvitsa iyo ichangobva kuburitswa GNOME 3.30 desktop, nekudaro ichipa kuwedzera kwakawanda mukuita kwemitambo.
Yakagadziridzwa yekutanga nguva uye XDG portal rutsigiro rweSnap maapp
Canonical iri kuunza zvimwe zvinobatsira kune ayo Snap mapakeji.
Instant kunyorera kunotanga munguva shoma. Nerutsigiro rweiyo XDG portal, Snap inogona kuiswa mune mashoma mashoma kubva kune iyo Snapcraft Chitoro webhusaiti.
Iyo huru gore uye yeruzhinji server server senge Google Cloud SDK, AWS CLI, uye Azure CLI zvava kuwanikwa mushanduro itsva.
Iyo vhezheni nyowani inobvumidza kuwana kune mafaera pane iyo inomiririra system kuburikidza neazvino desktop desktop.
Pamusoro peimwe shanduko dzatinogona kuratidza Mukuburitswa kutsva kweUbuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish inosanganisira:
DLNA rutsigiro runobatanidza Ubuntu ne Smart TV, mapiritsi uye mamwe maDLNA anoenderana michina
Fingerprint scanner ikozvino yakatsigirwa
Ubuntu Software inobvisa kutsamira kana uchibvisa software
Chishandiso chekushandisa chakatamisirwa ku gcc 8.2 ine glibc 2.28
Ubuntu 18.10 zvakare inogadziridza kune anovhura 1.1.1 uye gnutls 3.6.4 ine TLS1.3 rutsigiro
Kuti uwane iyi nyowani sisitimu yemufananidzo uye isa ino kugoverwa kweLinux pakombuta yako kana iwe uchida kuyedza pasi pemuchina chaiwo. Iwe unongofanirwa kuenda kune yepamutemo webhusaiti yekugovera uye muchikamu chayo chekurodha unogona kuwana mufananidzo weiyo system.
Unogona kushandisa Etcher kusevha iyo mufananidzo kune USB.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Ubuntu 18.10 yave kuwanikwa kurodha pasi uye nekuisa
Mhoro LinuxBoot, Mhoro UEFI: iyo yemahara firmware imwe nzira inosvika